Imaski ekhuselayo enokukhuselwa, iMaski yaBadala, iMaski yaBantwana, i-N95 Mask, abaVelisi beMaski bezoNyango kunye nabaThengisi -iFektha baseChina - iQuanzhou waimaoniu yokuNgenisa nokuThengisa iiRhwebo kumazwe angaphandle, Co.
Imaski ekhuselayo yokulahla inokwahlulwa ibe yimaski ethe tyaba kunye neemaski ezinemibala emithathu. Imaski enemilo mithathu inokwahlulwa ibe ziimaski zekomityi elahliweyo, iimaski ezisongelayo zokulahla, iimaski zenkunkuma yediski.Izixhobo ezikhuselayo zemaski ekhuselweyo: indwangu engalukanga, umatshini wokucoca umoliblown umqhaphu ubungakanani obuqhelekileyo: 17.5cmx9.5cm
Into ephambili yokunxiba iMaski yaBantwana kukuthintela uthuli lwangaphandle okanye iintsholongwane ukuba zingangeni emzimbeni.
Oku kulandelayo malunga nokuDibana kweMask yabantu abadala, ndiyathemba ukuba kuya kukunceda ukuba uqonde ngcono iMaski yaBadala.
Iimaski zococeko lwaseburhulumenteni zisetyenziselwa ukuhluza umoya ongena ngempumlo kunye nomlomo. Iimaski zococeko lwasesidlangalaleni zithintela iigesi eziyingozi, ivumba kunye namachaphaza amanzi ukuba angangeni kwaye ashiye isinxibo kunye neempumlo Imaski yococeko lwaseburhulumenteni yahlulahlulwe ngokweemaske zekotoni, iimaski ezingezolukiweyo, iimaski zepolymer, iimaski zekharbhon yegesi ezincitshisiweyo, kunye neemaski zecarbon fiber ezivaliweyo.
Imaski yezonyango yenziwa ubukhulu becala enye okanye ezingaphezulu zeelaphu ezingalukwanga. Eyona nkqubo iphambili yokuvelisa iimaski zonyango zibandakanya i-meltblown, spunbond, umoya oshushu okanye i-acupuncture, njl. Iimaski zonyango zahlulahlulwe zaba ngumaleko wangaphakathi, ungqimba oluphakathi nolwangaphandle. Ungqimba lwangaphakathi luyi-gauze ecocekileyo okanye ucoceko olungalukwanga. Isambatho esingalukwanga okanye ungqameko lwe-polypropylene ye-meltblown ye-Ultra.